tone of voice ဘာလဲ ဘယ်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » tone of voice ဘာလဲ ဘယ်လဲ	6
tone of voice ဘာလဲ ဘယ်လဲ
Posted by ムラカミ on Sep 28, 2016 in Arts & Humanities, Drama, Essays.. |6comments
Tone of Voice အကြောင်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် လေ့လာချင်ယို့…
သိသူများ မျှ ဂျပါအူးဗျာ…
multiple tone for multiple segments
same tone to all segments
အဲ့သည့်ကြား ဗျာများ နေလို့ပါ…။
ကွကိုယ် ဆိုရင်တော့ singin’ da same damn song with different melodies ပေါ့…
multiple account ကျတော့ အဆင်မပြေပြန်ဝူးဗျ….
တော်သေးတယ် .. ကိုယ့်မီးတ၀က် ယူပြီး သူ့ဆေး တခြမ်း ပြန်တိုက်မယ့်လူ အနား ရှိနေတာ…
ムラカミ says: တကယ်တော့ ကျော့်ဘွဟာ … ပဇပ်လှုပ်မှ ပဇပ်လှုပ်ရတဲ့ ဘွပါ….။
pooch says: ဘာဆို ဘာမှ မသိဘူး ဒါနဲ့ စကားမစပ် ရူးနေတာလားဟင် သွက်သွက်ခါနေသလိုပဲ အပျော်လွန်နေပုံပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ムラカミ says: ကျုပ် copyrighting ရေးတယ်ယေ …
curating လည်း လုပ်တယ်…
လုပ်ရင်းမတ်တပ်ကနေ … မလုပ်တတ်သလောက်ဖြစ်လာလို့…
သျှားသက်မာန် says: နားမလည်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: တကယ်တော့ နင့် ဘွဟာ ပုလင်းလှုပ်မှ ပဇပ်လှုပ်ရတဲ့ဘွပါလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: tone of voice ဆိုတာ အသံထွက်တဲ့ အတုံးကို ပြောတာလား ဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.